DOWNLOAD Iris F-20 Tigershark FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 22 191
The Iris F-20 Tigershark ndiye tarenda idzva shanduro imwe Iris okutangatanga zvigadzirwa. Pakutanga yakatanga kare 2004, shanduro itsva iyi Tigershark kunounza hachizi hutsva.
Remodelled kubva kumusoro kusvikira pasi uye uine zita idzva ndege modeling, makaseti idzva rakapotsa Cockpit, chigadzirwa ichi kwave rakagadzirirwa sandara panze, uzere throttle kunonakidza!
The ndege rakagadzirwa se'chibayiro chii kana 'chigadzirwa, kunobva kumativi pfungwa F-20 kudai apinda basa.
2048x2048 Pixel bitmap vanatenzi resized kuna 1024x1024 pixels dzose paintschemes ichipa nakisa unopinza bumpmaps uye zvinoshamisa mifananidzo mhiri ZVOSE Graphics makadhi inokwanisa kumhanya FSX!
A rakasiyana Ordnance Manager kubvumira kuti kusarudza chaizvo ordnance chaunoda kutakura ndarairwa nemi.
Murovedzi Ane soundset kubva turbine Sound Studios pamwe 360 dhigirii ruzha panning customized zvakananga nokuda FSX.
A kusarudza wakanaka paintschemes pamusoro gumi kushandisa zvakanaka unyanzvi nzira iripo kubvumira kuti wakanaka weathering uye chinooneka zvakajeka pamusoro shanu unyanzvi ziso yokutevedzera.
A yepamusoro paintkit dzichiratidza zvose weathering akaturikidzana kubvumira vanoshandisa azere customization pamusoro repaints vose mbiri 2048x2048 Pixel unhu!
Murovedzi Ane ndege womuenzaniso chakagadzirirwa kubva pasi kukupa mudanga uye kunonakidza kubhururuka airframe inokwanisa aimhanya Mach 2 +.
Zvizere 3D wafukidzwa vectoring chiutsi pamusoro F-20 zvatinogadzira hazvigoni kunyatsotevedzera zvinoita chete kutamira 3D afterburner!
An zvakadzama mutyairi rekushandisa yose mashoko unofanira kuziva kuti kushandisa Iris F-20 Tigershark hurongwa uye ndege zvakakwana zvishandiso nokuputsika, checklists uye zvakawanda.
Iris F-20 Tigershark FSX & P3D Download
Downloads: 17 338
Downloads: 12 297
Downloads: 6 377
Downloads: 31 067